Makara Grills, Gesi Grills, Magetsi Grills Mugadziri | Wellsure
Yedu yekupa yemarasha grills, gasi grills, emagetsi grills akateedzana kugona.
Ipa Solution Yese
Wellsure tarisa pane yakazara mhinduro inopa panzvimbo pekugadzira chete iyo inosanganisa dhizaini, kugadzira, kutengesa uye imwechete-yekumira sevhisi.
Yedu Charcoal Grills, Gesi Grills, Magetsi Grills Zvigadzirwa
Chii Chinofadza Vatengi Vedu.
WST - 019 hovhoni ye pizza
WST - 019 hovhoni ye pizza. > Chigadzirwa chiri chepamusoro mhando uye chine kuvimbika kuita pamakwikwi mitengo.
WST-005. Kuti uve nechokwadi chehunhu hwevashambadzi vezvinhu zvavo zvakavhenekwa zvakaomarara uye chete avo vatengesi vanosangana nemitemo yenyika dzepasi rose vanosarudzwa sevashandi venguva refu.
Wst-021 yakapetwa kaviri gasi hovhoni / yekunze kicheni nhepfenyuro yekuvandudza
Wst-021 yakapetwa kaviri gasi hovhoni / yekunze kicheni nhepfenyuro yekuvandudza. Ichi chigadzirwa chinotengeswa kune nyika zhinji nedunhu.
Yakavakwa-mune grill HS-20200811 / Wst-021 maviri-anopisa gasi ovhoni
Yakavakwa-mune grill HS-20200811 / Wst-021 maviri-anopisa gasi ovhiri. Chigadzirwa chinoratidzira yakakwira yekumonera mhando. Tepi yekuyeresa inozoshandiswa kungoverenga iyo nhamba yematanji padiki padiki pazvidimbu zviviri pasitayera kuita chokwadi chekusimbisa.
Ipa Yakagadzirirwa Service.
Kana iwe usingakwanise kuwana chakagadzirwa-chakagadzirwa chinokodzera chirongwa ichi, rega Wellsure's nyanzvi yemarasha grills, gasi grills, magetsi grills kuita basa ibatsire iwe kuwana icho chakakodzera chigadzirwa mukati memazuva manomwe pasina kupa nguva yekushambadzira kana maitiro ekugadzirisa.
Nekwaniso inobudirira uye ruzivo, tinogona kupa OEM / ODM kugadzirisa maererano nepfungwa yevatengi kana kupa. Isu zvakare tine hunyanzvi manejimendi uye tinopfuura ISO9001, CE, CSA chitupa, saka tine chivimbo chekupa vatengi vedu zvigadzirwa zvakanaka uye mhinduro dzakakodzera. Tinogamuchira vatengi vese kubva pasirese.
Kana iwe usingakwanise kuwana chakagadzirwa-chakagadzirwa chinokodzera chirongwa ichi, ngatipei hunyanzvi hwakagadzirirwa sevhisi kuti ikubatsire iwe kuwana icho chakakodzera chigadzirwa mukati memazuva manomwe.
Mutengi akazivisa zvinodiwa fomu fomu, mashandiro emabasa, hupenyu hwekutenderera uye zvinodiwa kutevedzera.
Dhizaini yekugadzira inosanganisirwa kubva pakutanga kwechirongwa kuona kuti yakasarudzika dhizaini chigadzirwa chakanyanya kukodzera kune zvinodiwa nevatengi.
Kuti tipe chimiro chepamusoro chemhando yepamusoro, isu tinochengetedza inoshanda yehutano manejimendi system.
Kana iyo prototype yasimbiswa maererano nemafomu, mashandiro, uye zvinodiwa, kugadzirwa idanho rinotevera.
Zvigadzirwa zvedu Zvakakunda Zvizhinji Certification Mune Zvimiro Zvemhando Uye Kugadziridza.
Zhongshan Wellsure Metal Zvigadzirwa Co., Ltd.
Zhongshan Wellsure Metal Zvigadzirwa Co., Ltd. yakagadzwa muna 2003, isu takasarudzika zvigadzirwa zvealuminium, fenicha yekunze, marasha grills, gasi grills, yakavakirwa-mukati magirosa, makicheni ekunze, kupfira mate rotisseries, steak uye vanogadzira pizza, magetsi grills, gomba remoto, kuputa, kamado uye BBQ zvishandiso Etc .
Fekitori ye Wellsure inovhara nzvimbo inosvika 63333 mativi emamita. Tine huwandu hwakazara hwezvigadzirwa zvemberi zvekugadzira uye zvekuyedza michina, kusanganisira semusangano nekucheka, kutsika, kukotama, kunhonga, kutenderera, kurapwa kwepamusoro uye kugona kwegungano. Tine timu yeinjiniya ine makore anopfuura gumi 'ruzivo rwekusangana nezvinodiwa nevatengi zvakasiyana. Isu tinotarisa pamhinduro yese kupa kwete chete kugadzira asi kusanganisa dhizaini, kugadzira, kutengesa uye imwechete-yekumira sevhisi.
Nekwaniso inobudirira uye ruzivo, tinogona kupa OEM / ODM kugadzirisa maererano nemafungiro evatengi kana zvidhori. Isu zvakare tine hunyanzvi manejimendi uye tinopfuura ISO9001, CE, CSA chitupa, saka tine chivimbo kuti tinogona kupa vatengi vedu zvigadzirwa zvakanaka uye mhinduro dzakakodzera.
Yedu yemarasha grills, gasi grills, zvigadzirwa zvemagetsi grills zvinonyanya kutumirwa kuUnited States, Australia, Europe neSouth Africa. Tinogamuchira vatengi vese kubva pasirese.
17 Makore +
Anopfuura makore 17 'ruzivo injiniya timu.
Hwakavimbika Hunhu Kusangana nevatengi Vedu.
WST-011 infrared hovhoni
WST-011 Infrared Ovheni